KALISTEGIYA (POVY, FRENCH ROSE, GORGORTAN AMA BJøRK) - BEERITAANKA IYO DARYEELKA, TARANTA, BEERASHADA, NOOCYADA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo koro Kalistegiya ee bannaanka u furan
In qaabeynta muuqaalka muuqaalka dhirta ornamental waxay leeyihiin meel gaar ah. Iyada oo caawinta dhirta noocan oo kale ah, dayactirka, qurxiyo qurux badan. Mid ka mid ah wakiilada ugu quruxda badan ee dhirta noocan oo kale ah waa calistegia, taas oo looga doodi doono qodobkan.
Sharaxaad kooban iyo codsi ku saabsan qaabeynta beerta
Geedkan dilka ah waxaa iska leh cyndiga Povoy iyo qoyska Vyunkovyh. Waxaa sidoo kale loo yaqaan magacyada cusub, french rose, bjørk. Isticmaalka kalistegii ee qaabeynta Waxaa jira noocyo badan oo kalistegy ah. Dhamaantood waxay ku kala duwan yihiin ciriiri afkoda, caleemaha la jarjaray ee seddex xagal ah ama seddex xagal iyo sedexleer ah (illaa 10 cm dhexroor) ubax cad, midab madow ama casaan. Ubaxku wuxuu noqon karaa dawanno ama laba jibbaar ah, oo u eg ubaxyada Rose, waxay ubaxu sii socdaa ilaa dhaxan.
Nidaamka xididka Kalistegii si fiican ayaa loo horumariyaa, sidaas daraadeed caleemaha cusub waxay u kici karaan qiyaas ahaan ballaadhan, illaa 1.5 m, masaafada goobta beerta. Murugada buuggan ayaa gaareysa 5 m dhererka, waxay ku daboolan yihiin maqaar guduudan. Nooca uurjiifka - sanduuq afartan ah. Xilliga jiilaalka, qeybta dhulka ee dhirta ayaa dhinto, iyo guga wareegga cusub ee horumarinta bilaabmaa.
Qoyska Vynukov sidoo kale waxaa ka mid ah dhirta sida: Yam, ipomoea, bindweed beerta, iyo qoryaha ampelous.
Warshadani waxaa loo adeegsadaa qurxinta dhulka. Qodobka weyn ee naqshadeeyayaasha muuqaalka ah waxay jecel yihiin in ay daboolaan dhismayaasha aan shuruudaha lahayn, qurxinta geela, baalasha, godadka iyo deyrarka. Mid ka mid ah codsiyada xiisaha leh waa ubaxyo ubax oo ku wareegsan balbalada guriga.
Qodobbada qurxinta, calistegia waxay si fiican u isugu dhejisaa qulqulatooyinka sida clematis iyo xeryaha. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in la abuuro dusha sare, oo ka soo horjeeda xayawaanka, marigolds, petunias, iwm.
Dib u eegis Video ah ee Kalistegia Plant
Doorashada goobta degelka
Geedkan, goobta ugu fiican waxaa loo tixgeliyaa in lagu iftiiminayo qorraxdu si toos ah subixii subaxdii kadibna ciyaalkii dib u daadasho. Haddii lagu dhex beeray meel gebi ahaanba hadhaysan, ubaxu wuxuu bilaabmi doonaa wakhti dambe wuxuuna dhammaan doonaa waqti hore, halka ay noqon doonto mid dhalaalaya.
Kalistegia waxay jeceshahay dhiiqada iftiinka ah, carradu si fiican u da'ay, meel u dhow biyaha dhulka ayaa si xun u saameeya. Hal meel waxay ku koraan 10 sano.
Caadi ahaan, Kalistegia waxaa la beeray bishii May, bilowgii ama dhexda, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada deegaanka. Ka hor inta beerto, waxay qodayaan goobtii iyo dalbashada bacriminta. Si aad u isticmaasho baayacmushtiyo adag, tusaale ahaan "Bona Forte", iyo sidoo kale ash (2 tbsp 1 sq. M).
Waa muhiim! Si looga hortago kororka xad-dhaafka ah ee nidaamka asaasiga ah ee warshad la bixiyay iyo isbadal ku yimaada weelka, goobta degelka waa la deyriyay. Tani, xaashida caleenta, caag ah, iwm, ayaa qoday si qoto dheer ah 30 cm, ayaa loo isticmaalaa.
Qaybinta beerto ee rhizomes
Habka ugu wanaagsan ee lagu jaangoyn karo dhammaan noocyada kalistegia waa qaybta rhizomes. Waayo, tan, dayrta (dhamaadka bisha Sebtembar ama bilowgii Oktoobar) dhirta ayaa qoday, qaybta dhulka ayaa la jarayaa. Inta kale ee dhulka la dhigo waxaa la dhigayaa weel, kaas oo ah in la dhigo meel qabow oo dhan jiilaalka. Inta lagu jiro kaydinta waxaa lagama maarmaan ah in ciidda qoyan si qaas ah ula geedka. Bishii Maarso, rhizomes waxaa laga sii daayey ciidda waxayna gooyeen qiyaastii 5 cm, qaybaha waxaa lagu rusheeyaa dambas. Jajabyadaas waxaa lagu beeray weel caam ah ama shakhsi shakhsi ahaan qoto dheer oo ah 5 cm oo ku yaal meel bannaan. Sida substrate adigoo isticmaalaya isku dar ah ciid, humus iyo soday saafi ah 1: 2: 2.
Ka dib markii la beero, weelasha ama dheryooyinka ayaa lagu daboolay filim waxayna ku tageen qol diiran, heerkul ah + 22 ... +25 ° C. Substrate waa in yar oo qoyan.
Ma taqaanaa? Guryaha Cuba, Jamaica iyo jasiiradaha kale ee geedaha West Indies waxay sameeyaan 33% tirada guud ee dhirta. Guryaha Yurub, tiradooda waxaa lagu qiyaasay 1.8%.
Ka dib markii ay soo baxaan caleemaha filimka ayaa laga saaray. Marka sprouts gaari dhererka 5cm, waxay xoqan yihiin. Bishii May, geedo waxaa lagu beeray dhulka furan. Masaafada u dhexeysa beerto geedo shakhsi ah - 20-30 cm.
Mararka qaar Kalistegiya beeray xilliga dayrta, dhammaadka xilliga sii kordhaya. Tani, qayb ka mid ah nidaamka xididka waxaa laga sii daayay ciidda geedaha sii kordhaya.
Qayb ka mid ah xidid toos ah leh caleemaha la soo xulay oo kala gooni ah, dhibcood jarjirta waxaa lagu daaweeyaa ash. Xididkan waxaa lagu beeray diyaarinta, sida kor ku xusan, xajmiga si qoto dheer oo ah 15 cm oo ah meel bannaan. Goobta xilliga jiilaalka waxaa lagu daboolay alaabo daboolan.
Sida loo daryeelo liana
Dharjirta cirifka ah ee dhejiska ah, mesh kakooban, qaababka dillaacsan, waxyaabaha xayawaanka beerta loo isticmaalo ayaa loo adeegsadaa taageerada agagaarka geedka canabka ah. Dhexdhexaadiyaha taageeradu waa inuusan ka badnayn 10 cm, haddii kale waxay ku adkaan doontaa in ciyaalka laga qaado. Waxaa fiican inaad u diyaariso taageerooyinka isla markiiba ka dib markii aad beerto canabkiinna.
Kalistegii si joogto ah ayuu u waraabiyaa, laakiin dhexdhexaad ah, iyo inta lagu jiro abaarta - badanaa. Haddii roobabka caadiga ah ee xagaaga ku dhaco, waxaad sameyn kartaa adigoon wax cabin.
Guud ahaan, dhirtu waxay awood u leedahay inay ku adkeyso wakhti gaaban oo aan qallajin lahayn iyada oo aan waraabin. Guga, ka hor koritaanka firfircoon ee kallistegia, waxay dabacsan ciidda ku wareegsan oo keeno Doodwanaag.
Waa muhiim! Kalistegia sidoo kale waxay u isticmaashaa adeegsigeeda daawada dhaqameed, laakiin sababtoo ah sunta, waxaa si weyn loogu talinayaa in aan lagula talin dadka inay diyaariyaan diyaar garow caafimaad.
Inta lagu jiro xilliga ubax, joogto ah (labadii asbuucba) dhar xidhashada ee calistegia ayaa lagula talinayaa. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa Bacriminta macdanta culus ee dhirta dilaaga ah, tusaale ahaan, "Bona Forte", "Etisso" ama "Agricola Aqua". Dhamaadka dhammaadka Sebtembar waxaa lagula talinayaa in lagu daro dambaska carrada ee heerka 2 tbsp. 1 digrii. m
Wakhti ahaan, waa inaad ka saartaa burooyinkeeda ubax la qalajiyey, haddii kale waxay farageliyaan soo ifbaxyo ubaxyo cusub iyo khiyaano muuqaalka of canabkiinna. Intaa waxaa dheer, sida loo baahan yahay, waxay kala jajabiyaan cistegy, sameynta foomka la doonayo ee beerto iyo ka saarto furfurnimada ka baxsan ka kooban. Si kastaba ha ahaatee, warshadani waxay u dulqaadaneysaa qaboobaha qaboobaha, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo waxyaabo qaar ka mid ah waxyaabaha daboolka ah ee barafka aan lahayn, jiilaalka adag, oo leh waraaqo, joonis, iyo xoortada suufka. Marka xilliga sii kordhaya uu dhamaado oo dhirta ay bilaabaan in ay u dhintaan, waa in la gooyaa.
Cayayaanka iyo cudurada: kahortagga iyo daaweynta
Cudurada, calistegia ayaa ugu nugul caarada rootka iyo xagta oo budada ah. Khatarta dhacdooyinkoodu waxay sii kordheysaa cimilada qabow, qoyan. Si looga hortago cudurada, geedka canabka ah waxaa lagu daaweeyaa "Fitosporin". Ka mid ah cayayaanka waa slugs iyo snails. Waxay la dagaallamaan sunta cayayaanka. Tani waxay noqon kartaa Duufaan ama Qosol.
Waxaan kugula talineynaa in aad wax dheeraad ah ka akhrido sida loola tacaalo slugs beerta.
Noocyada ugu waaweyn
Kordhay dhowr nooc oo kalistegii ah, oo badiba ku jira nooca iyo midabka ubaxa. Sharax kooban oo ku saabsan kuwa ugu caansan ee iyaga ayaa hoos ku qoran.
Kalistegiya fluffy waxay ka timid Shiinaha. Isbeddelka - caleemaha dheer ee gaaraya 4 m, iyo casaan cas, laba, ubaxyo yar yar udgoon. Iyada oo ku saleysan noocyada noocan ah, noocyo dhowr ah ayaa la sameeyay, kuwa ugu caansan kuwaas oo ah: Duufaan jilicsan.
Duurjoogta, noocyadani waxay ku koraan Altai iyo koonfurta Primorsky Krai. Dhererka ah afkoda dhirta ee aan ka badnayn 80 cm, waxay ka koreeyaan kor ku xusan, sidaas daraadeed maqaarkii caleemaha waxaa lagu dhaqmaa. Ubax waa midab casaan, jilicsan.
Magaca kale ee noocyada - xayndaab cusub, waa ku dhex yaal Yurub. Caleemaha waxay gaartaa 3 m, ubax cad, jilbaha qaabeeya.
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso inaad barato sida loo ciribtiro cawska beerta, taas oo geedisocodku ay kaa caawin doonaan in laga takhaluso, qalab nooca loo doorto in laga saaro caws ka soo xididada, iyo sidoo kale cawska cawska ayaa kaa caawin doona in la burburiyo haramaha.
Dhirta ayaa si dhakhso ah u kobcisa, uguna carqaladeeysa dhulka, waxay qaabisaa nidaam xididaysan oo wanaagsan. Sidaa daraadeed, waxaa badanaa loo arkaa inuu yahay mid aan fiicnayn.
Noocyadaas waxaa sidoo kale loo yaqaanaa magaca caleen-caleen-caleen si loogu daboolo qaabka caleen saddexda ah. Dhererka jeexjeexa ee ku yaala wuxuu gaadhaa 2.5 m, ubaxa waa labanlaab, casaan khafiif ah.
Calaamadaha noocan ah waa ubaxyo casaan ah oo labanlaab ah, oo kor u qaadaya illaa 10 cm dhexroor. Waxay u koraan si aad u adag, taas oo siinaysa warshad muuqaal cajiib ah. Murugadu waxay ku kori kartaa 3.5 m. Sidaas darteed, noocyada kala duwan ee kalistegii waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa naqshada muuqaalka. Waxay qurxin karaan arboreska iyo godadka, ma daboolaan xarumaha qalabka lagu qurxiyo, waxay noqdaan kuwo dusha u ah ubaxyada kale.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato astaamaha beeraha ee calytegy terry.
Isla mar ahaantaana warshadu waa mid aad u liidata si ay u daryeelaan, iyo, oo ah daa'in, waxay qurxin kartaa beerta sanado badan.
Sida loo xiro digirta xilliga jiilaalka
Tilmaamaha isticmaalka daroogada "Enrofloks"
Champignons si dhakhso ah ayuu u kacay qiimaha ka hor soonka
Waxyaabaha kiimikada ee xayawaanka, kaloorida iyo faa'iidooyinka caafimaadka. Maxay yihiin waxyaalaha ka soo horjeeda khudaarta cagaaran?
Waa maxay sababta ay digaagadu u dhacayaan
La qaboojinta canabka xilliga dayrta
Beerta geedo iyo daryeel
Maanta, bannaanka iyo bannaanka u badan yihiin ku qanacsan yihiin fududaanta iyo fududahay isticmaalka lagu koriyo. Geedo koray ubaxyada noocan oo kale ah, waxay muujinaysaa natiijooyin wanaagsan ee biqilka, koraya oo horumarinaya si ka wanaagsan. Intaa waxaa dheer, dhirta ayaa si fiican loogu habeeyey ka kooban ee ciidda, adag. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonnaa arsadaha u adeegaya saldhigga naqshadeynta: waxa qalabka loo isticmaali karo iyo sida loo dhiso baraf-yar-yar oo laga helo waxa gacanta ku jira. Read More
Canab "Cabernet Sauvignon": sifooyinka iyo tiknoolojiga beeraha ee beerashada
Mushahada la qaloociyay: waa la cuni karaa ama maahan